एलिसाको जवानीमा आर्यनको नजर | Filmy Bahar
एलिसाको जवानीमा आर्यनको नजर
काठमाडौं । दशैंको शुभारम्भ अर्थात् घटस्थापनाको अवसर पारेर फिल्म ‘च च हुई’ को दोस्रो गीत ‘जवानी’ सार्वजनिक भएको छ । यसअघि ‘सिल्की सिल्की’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको थियो । नयाँ गीतमा आर्यन सिग्देल र एलिशा शर्मा फिचर्ड छन् । केहि दिन अगाडी बालाजु स्थित एनएफडिसीमा भव्य सेट लगाएर गीतको छायाँकन गरिएको थियो ।
शिशिर खातीको कोरियोग्राफीमा तयार गीतमा निर्देशक साम्तेन भुटिया र बिनय सापकोटाको शब्द तथा रोशन थापाको संगीत छ । लुटको उध्रेको चोली र जात्राको नोट नोट जस्ता गीत तयार पारेर चर्चामा आएका रोशनले यस गीतमा स्वर पनि दिएका छन् । उनलाई गायनमा सुमन गुरुङले साथ दिएकी छन् । आउँदो मङ्सिर ६ गते प्रदर्शन हुने फिल्ममा निर्देशन र सम्पादन साम्तेनको रहेको छ ।
फिल्ममा आर्यनसँगै भोलाराज सापकोटा, मिरुना मगर, माओत्से गुरुङ, पुस्कर गुरुङ, बबिता मल्ललगायतको अभिनय छ । एजीएल इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्ममा अमृत घोले लामाको लगानी छ । यसमा सुशन प्रजापतिको छायाँकन रहेको छ । ‘च च हुई’ को पटकथा सिजन दाहाल र सन्देश अर्यालले लेखेका हुन् ।
फिल्मका गीतमा राजनराज शिवाकोटी , सुरज शाही ठकुरी र रोशन थापाको संगीत छ । यसमा निमालामाको मेकअप , रेनिश फागोको कलर करेक्सन, श्री श्रेष्ठको द्वन्द, शिशिर खातीको कोरियोग्राफी, सुजिल कर्माचार्यको ब्याकग्राउण्ड स्कोर रहेको छ । फिल्मलाई उपत्यकामा रिच इन्टरटेनमेन्टका करण श्रेष्ठ र मोफसलमा एफडी कम्पनिले वितरण गर्नेछ ।
वल्र्ड नेपाली म्यूजिक अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक
आइआइएफटीमा महेश्वरीनाथ उत्कृष्ट फेशन डिजाईनर
स्रष्टालाई भुवन चैत्य बसुन्धरा फाउण्डेसनको पुरस्कार
पत्रकार ध्रुवको लेख उत्कृष्ट
अमेजन प्राइममा चिनी कम रंग कडा
अस्करको नियममा महामारीको असर
निफमा महामारी विधा थपियो
अमिताभले चलाउन पाउलान् केबीसी ?
खबपुलाई कोरोनाले रुवायो
इरफानकी अभिनेत्रीलाई विवाहको अनौठो प्रस्ताव
सुशान्तको मृत्युले मजदुरलाई तनाव !
किन अतालिन्छ शिवको मन ?
रमेश र सरिताको प्रेममा भूपेन्द्र भिलेन
रीता फोम्बोको माङसरी पाःलाम
किरण र स्मृतिको माया मिठो ललितपुरेको